Shiinaha Polyethylene Glycol 4000 warshad Peg4000 iyo soosaarayaasha | Yinuoxin
PEG-4000 waxaa loo isticmaalaa kiniin, kaabsol, filim, kiniiniga la tuuro, suufka, iwm.
PEG-4000 iyo 6000 waxaa loo isticmaalaa sida waxsoosaarka warshadaha dawooyinka, diyaarinta suufka iyo koollada, wakiilka dahaarka ee warshadaha waraaqaha si loo kordhiyo dhalaalka iyo jilicsanaanta warqadda, lagu daro warshadaha caagga ah si loo kordhiyo saliida iyo caagga alaabada caagga ah, waxay yareyneysaa isticmaalka tamarta ee ka shaqeynta iyo sii dheereynta nolosha adeegga alaabada caagga ah.
Waxaa loo isticmaali karaa matrix ahaan xagga warshadaha dawooyinka iyo is qurxinta si loo hagaajiyo u nuglaanshaha iyo barta dhalaalka, saliida iyo qaboojiyaha warshadaha caagga iyo birta, kala firdhinta iyo emulsifier ee sunta cayayaanka iyo midabka, wakiilka ka hortagga iyo saliida warshadaha dharka.
Baaxadda PEG iyo awoodda ay u leedahay inay sii deyso daroogada awgeed, culeyska maadada sare ee PEG (PEG4000, PEG6000, peg8000) ayaa aad waxtar ugu leh sida xabagta waxsoosaarka kiniiniga. Peg wuxuu ka dhigi karaa dusha kiniinnada mid dhalaalaya oo siman, mana sahlana in la dhaawaco. Intaa waxaa sii dheer, qadar yar oo ah culeyska molikal sare ee PEG (PEG4000, PEG6000, peg8000) ayaa ka hortagi kara isku dhejinta udhaxeysa kiniiniyada sonkorta leh iyo inta udhaxeysa dhalooyinka.
Barta adkeynta ℃
Waxyaabaha biyaha （%）
1% xalka aqueous）
Caano Cad oo adag
Waxqabadka Iyo Codsiga
Taxanaha alaabtan ayaa badiyaa lagu milmi karaa biyaha iyo dareeraha kaladuwan ee kaladuwan, laakiin laguma milmi karo hydrocarbons aliphatic, benzene, ethylene glycol, iwm. Waxay leedahay xasillooni aad u fiican, nuurad, dheecaan biyo, qoyaan haynta, xajinta iyo xasilloonida kuleylka. Sidaa darteed, maadada, huurka, kala firdhinta, xarkaha, wakiilka cabbirka, iwm, farmasiyada, qurxinta, caagga, caagagga, kiimikada kiimikada, sameynta waraaqaha, rinjiga, electroplating, sunta cayayaanka, ka shaqeynta birta, soo saarista cuntada iyo warshadaha kale ayaa si ballaaran loo isticmaalaa.
Faahfaahinta xirxirida:dareere asal ahaan 230kg baakado foosto galvanized. Baakid warqad adag oo 25kg Kraft ah.
Kaydinta:Badeecadan waa la rari karaa iyadoo loo raacayo Kiimikada Guud. Ku keydi meel qalalan oo hawo leh si aad uga ilaaliso iftiinka qoraxda iyo roobka.
Faallooyin:shirkadeena sidoo kale waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ah alaabooyin taxane ah PEG.
Hore: Polyethylene Glycol 3350 Peg3350
Xiga: Polyethylene Glycol 6000 Peg6000
Qaab Yijie R-90 Release Qaab Gudaha ...